१५ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:४५ प्रकाशित
काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधारको माग गर्दै १७ दिनदेखि अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बि’ग्रदै गएको छ । डा.केसी आफ्नो जीवनलाई जो’खिममा राखेर अनशन बसेको बुधबार १७ दिन पूरा भएको छ । बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पुगेर उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । १९ औं सत्याग्रहमा रहेका केसीका जायज मागको सम्बोधन गर्नुपर्ने भट्टराईले बताएका छन् ।
अस्पताल पुगेर बाबुरामले केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिँदै केसीको माग र स्वास्थ्य अवस्थाबारे सरकारले चासो नराखेको भन्दै आ’पत्ति जनाए । उनले केसीलाई भेटेर फर्किएपछि ट्विट गर्दै उनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो नराख्नु अमानवीयताको परराकाष्ठा भएको बताएका छन् ।
उनले ट्वीटरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मेन्सन गर्दै सरकारलाई आँखा खोल्न समेत सुझाव दिएका छन् । ‘अरूको स्वास्थ्यका लागि आफ्नो जीवन जो’खिममा राख्दै अनसनरत डा. गोेविन्द केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दैछ’ बाबुरामले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘१९औं सत्याग्रहको १७औं दिनसम्म राज्यले उहाँको जायज माग र जो’खिम उन्मुख स्वास्थ्य स्थितिबारे कुनै चासो नराख्नु अमा’नवीयताको पराकाष्ठा हो ।’
ट्विटरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेन्सन गर्दै बाबुरामले थप लेखेका छन्, ‘सरकार आँखा खोल !’ डा.केसीले भदौ २९ गते जुम्लाबाट अनशन सुरु गरेका हुन। उनलाई असोज ५ गते नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। त्याहाँबाट हेलिकप्टरमा असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइए पछि उनी अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत छन्।
१५ आश्विन २०७७, बिहीबार ११:४५ मा प्रकाशित